Chate Sat | Freelance Online Marketing Jobs in Myanmar
Facebook Advert ( Post Sharing aboutalearning App)
- AA-1998 Posted5months ago
- 40,000-40,000 MMK
Business Management, Marketing, HR စသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်တွေကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် သင်ကြားပို့ချပေးမယ့် Mobile Application တစ်ခုကို မကြာမီ မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဈေးကွက်အတွင်းမှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးချိန်မှာ Application အကြောင်းကို Facebook မှတဆင့် သတင်းစကားဖြန့်ဝေပေးနိုင်မယ့်သူများ အလိုရှိပါတယ်။ ( Needed3People at present)
အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- အဆိုပါ Application ရဲ့အကြောင်းကို Facebook Post တစ်ခု အကျဉ်းချုပ်ရေးသားခြင်း ( ပါဝင်တဲ့ Features များ၊ ထူးခြားကောင်းမွန်မှုများ၊ လေ့လာသူတို့ ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် သုံးစွဲသင့်ကြောင်းတိုက်တွန်းချက်)
- Facebook Post ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသူများထံကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိသွားပြီး သိရှိသွားစေဖို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
အဆိုပါအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူအနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး၊ Friend (သို့) Follower ဦးရေများပြားသူဖြစ်ရပါမယ်။ အဆိုပါအလုပ်အတွက် ဘာကြောင့်သင့်တော်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Message ပေးပို့ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
( Project Budget 40,000 Kyats, non-negotiable, is for one person)
25 Jobs Posted.
84% Hire Rate,0open job.
Data Survey (Full Time)
Hospitality High End Cocktial Bar
Freelancers who are hired
Hired On 09-Dec-2018
General Translation Admin Assistant Customer Service Education & Tutoring Delivery Other Personal Assistant
May Thandar Kyaw
General Translation Content Writing Tour Guide / Local Expert Journalist/Reporter MC / Presenter
Khaing Wut Hmone Thin
General Translation Content Writing Education & Tutoring